IGran Sasso, ulwandle iAdriatic, ichibi lokuqubha, izinja zivumelekile
Phakathi kolwandle kunye neentaba, emaphandleni i-4 km ukusuka eTeramo, i-30 esuka e-Adriatic Sea kunye ne-30 ukusuka kwi-slopes yaseGran Sasso. Ukusetyenziswa kwequla lokuqubha i-4x8 ukususela ngoJulayi. Indawo yokuhlala ezimeleyo kwi-1st kunye nomgangatho owodwa, kunye namagumbi amabini okulala, enye kabini (ukuya kwiindwendwe ezi-2) kunye neyodwa kunye ne-1 kunye nesiqingatha sebhedi yesikwere kunye neyodwa (ukusuka kwi-3rd ukuya kwi-5 yeendwendwe). Kwiindwendwe ezi-2 igumbi labelwe, ukusetyenziswa okukodwa kwamagumbi ama-2 kubonisa ubuncinane iindwendwe ezi-3. Iindawo ezicocekileyo. Izinja ezivunyelwe ngemigaqo yeendawo eziqhelekileyo. Kuthethwa ulwimi lwesiRashiya.
Namhlanje ufuna ukuya elunxwemeni, ngaba ukhona kwimizuzu engama-30, okanye ezintabeni? in 30 Km. ukwi 1500 yeemitha kwi Gran Sasso, okanye echibini Campotosto, okanye ... ukususela ngoJulayi ungaphumla ecaleni pool ngaphandle, okanye egadini, yonke imihla kukho intabalala ukhetho.
Izinja kufuneka zigcinwe kwi-leash kwiindawo eziqhelekileyo ngaphandle kwefulethi ezifana negadi, i-swimming pool, indawo yokuhlamba impahla. Kubo kukho indawo ebiyelweyo egadini apho banokushiywa bekhululekile ngokuhambelana nobukho bezinye iindwendwe.
Indawo ezolileyo nenoxolo igqwesile xa uhamba nenja